"Dhawr Maalmood Ayaan La Ooyayay Wixii Barcelona...." Luis Suarez Oo Qisooyinkii Bixitaanka Barcelona Mar Kale Iftiimiyey - Gool24.Net
“Dhawr Maalmood Ayaan La Ooyayay Wixii Barcelona….” Luis Suarez Oo Qisooyinkii Bixitaanka Barcelona Mar Kale Iftiimiyey
Luis Suarez ayaa markii ugu horreysay qirtay in maalmo dhan uu ku qaatay oohin kaddib wixii ka dhacay Barcelona xagaagan.
Laacibkan oo Barcelon ay burburisay heshiiskiisii Camp Nou ayaa waxa uu u wareegay Atletico Madrid oo markiiba uu si fiican ula qabsaday, tiro goolal ahna uu u dhaliyey, laakiin bixitaankiisu ma ahayn mid uu isagu raalli ka ahaa, waxaase ku qasabtay kooxda.
Suarez oo u warramay telefishanka AUF TV ayaa waxa uu ka sheekeeyey niyad-jabkii kasoo gaadhay go’aankii kooxda iyo sidii uu tababare Ronald Koeman uu telefoonka ugaga sheegay inuu ka fasan yahay naadigiisa.
Ka hor bixitaankiisii iyo markii uu tegayba, waxa uu ooyayay dhawr maalmood isaga oo xasuusanayay waqtigii quruxda badnaa ee uu ku qaatay Ccamp Nou, guulihii ay gaadheen iyo qiimaha waqtigii quruxda badnaa ee ay soo wada qaateen ciyaartoyda kooxdiisa hore.
“Magaalada ayuun baan beddeshay laakiin nolosha Spain waa isku mid. Way iska caddahayd in markii ay kooxdu ii sheegtay inay ii raadinayaan bilow firfircoon, aniguna si fiican umaan qaadan sababtoo ah sida ay wax u socdeen. Waa se inaad aqbasho marka waqtigaasi soo dhamaado. Dhawr maalmood ayaan ooyayay, sababtoo ah xaaladda aan ku suganahay. Waxa aan dib u eegayay, inta aan soo faraxsanaa, inta la isoo qiimeeyey ciyaartoy ahaan, inta la isoo jeclaa, inta aan soo dareemay diirranaanta kooxda ee isiisay waqtiyada badan ee cajiibka ah. Laga soo bilaabo ciyaartaydii ugu horreysay… waxay isiisay xasuuso wanaagsan.” Ayuu yidhi Luis Suarez.